Xildhibaanadii ugu dambeeyay ee Aqalka sare oo maanta lagu doortay Muqdisho (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xildhibaanadii ugu dambeeyay ee Aqalka sare oo maanta lagu doortay Muqdisho (AKHRISO)
Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu doortay labada kursi ee ugu dambeysay xubnaha gobolada waqooyi u matalaya Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Doorashadaasi oo dhowr jeer hore dib loo dhigay muran ka dhashay awgeed ayaa ugu dambeyn lagu doortay Bilaal Idiris C/laahi iyo Saciid Cali Xuseen, kadib markii ay ka guuleysteen dhowr musharixiin kale ee la tartameysay.
Labadaasi xubnood ee cusub ayaa ka mid noqon doonna 54-ka xildhibaan ee ka tirsan xildhibaanada Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo lagu wado inay ka qeyb qaataan doorashada berri dhici doonta.
Dhinaca kale, waxaa dib loo dhigay doorashada xubnaha dheeriga ah ee ka mid noqon lahaa Aqalka sare, kuwaas oo ay madaxda madasha Qaran hore usoo jeediyeen in lagu darro.
Maalinta berri ayaa la filayaa in 329 xildhibaan oo kala ah 275 Aqalka hoose iyo 54 Aqalka sare ah ay doortaan madaxweyne cusub ee dalka hogaamin doonna 4-ta sano ee soo socota, waxaana musharaxiinta illaa haatan u taagan xilkaasi ay gaarayaan 22 musharax.
Labo musharax oo ka mid ahayd 24-ka musharixiin ayaa dhawaan ka tanaasulay tartanka doorasho, waxaana waqtiyadda soo socdo laga yaabaa in musharixiin horleh ay ka tanaasulaan tartanka doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya.